Meal Prep၊ အပတ်စဉ်မီနူးစီစဉ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ Bezzia
တောရက်စ် | 10/09/2021 14:00 | ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ
အပတ်စဉ်မီနူးကိုစီစဉ်ခြင်းသည်သင်စားသောအရာ၊ သင်မည်သို့စားပုံနှင့်သင်လုပ်ပုံကိုထိန်းချုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဲဒါကအဲဒါပဲ သင်၏အစားအစာသည်ကွဲပြားခြားနားရန်သေချာစေရန်ပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်မျှတသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီ့အပြင်၊ ဒီတပတ်အတွက်အစားအစာစီစဉ်ခြင်းရဲ့အခြားအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပါသေးတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကောင်းစွာစားခြင်းသည်အလွန်အလုပ်များသောဘ ၀ နှင့်နေရန်မခက်ခဲပါဘူး။
အချိန်သည်ရှားပါးသောကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုအကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်မည်သို့ခံစားရမည်ကိုသိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ နေ့စဉ်ချက်ပြုတ်ရန်စဉ်းစားခြင်းသည်မိနစ်များကိုဖြုန်းတီးခြင်းသည်သင်၏ပျော်ရွှင်စရာအရာများတွင်သင်၏အချိန်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အခွင့်အလမ်းကိုဆုံးရှုံးစေသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းထက် ပို၍ သက်တောင့်သက်သာနှင့်ထိရောက်မှုမရှိချေ အပတ်စဉ် menu ကိုစီစဉ်ရန်တစ်ပတ်တစ်ရက်တစ်ရက်အပ်နှံပါ.
1 "အစားအစာပြင်ဆင်မှု" ကဘာလဲ။
တစ်ပတ်အတွက်အစားအစာများစီစဉ်ခြင်းသည်အတော်လေးဖြစ်လေ့ရှိသော်လည်းကမ္ဘာပေါ်ရှိတစ်နေရာ (အထူးသဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) တွင်ချက်ပြုတ်ခြင်း (သို့) ချက်ပြုတ်ခြင်းတစ်ဝက် (သို့) ချက်ပြုတ်ခြင်းများသည်နေ့စဉ်မီးဖိုချောင်၌အချိန်ကုန်သက်သာစေနိုင်သည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ “ အစားအစာပြင်ဆင်ခြင်း” ဟူသောစကားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ထဲသို့ ၀ င်လာသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာအစားအစာများကိုပြင်ဆင်ရန်ဆိုလိုသည်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်၊ ၎င်းသည်တစ်ပတ်လုံးအတွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
သို့မှသာမီးဖိုချောင်၌အချိန်ကုန်၊ အပတ်စဉ်ကုန်စုံဆိုင်များမှငွေများကိုသက်သာစေပြီးမစားသုံးသည့်ပိုလျှံသောအစားအစာများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဒါပေမယ့်အစားအစာချက်ပြုတ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားကဒီ့ထက်မပိုပါဘူး၊ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့မီနူးကိုဒီဇိုင်းထုတ်တာဒါမှမဟုတ်ဟင်းလျာများချက်ပြုတ်တာလောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည်နည်းလမ်းတစ်ခုလုံးဖြစ်သည် အောက်ပါအဆင့်များပါ ၀ င်သည်:
သင်လိုအပ်သောအစားအစာကိုအတိအကျဝယ်ပါထုတ်ကုန်များပျက်စီးခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။ တစ်ပတ်လုံးအတွက်ယေဘူယျအားဖြင့်တစ်ခုတည်းသော ၀ ယ်ယူမှုအပြင်အစားအစာများအတွက်သင်လိုအပ်သမျှကို ၀ ယ်သည်။
အပတ်တိုင်းချက်ပြုတ်ရန်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကိုပေးပါ,2သို့မဟုတ်3နာရီနှင့်အတူကောင်းသောအဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူလုံလောက်လိမ့်မည်။
အချို့အပိုပစ္စည်းများပြင်ဆင်ပါ အစားအစာတိုင်း၌အစိမ်းရောင်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကဲ့သို့အစားအစာများအတွက် ဆိုလိုသည်မှာဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအချိန်တိုင်းရရှိနိုင်စေရန်ပမာဏအတိုင်းလှီးဖြတ်သည်။
တစ်နေကုန်အလုပ်လုပ်ပြီးအိမ်ပြန်တာနဲ့အစားအသောက်ပြင်ဆင်တာထက်စာရင်အိမ်ကိုပြန်လာတာထက်ပိုပြီးဆိုးရွားတဲ့အရာမရှိပါဘူး။ သင်ကရေခဲသေတ္တာကိုဖွင့်ပြီးအဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားသောအစားအစာကိုအချိန်တိုင်းတွေ့နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်သင်ရှောင်ရမည့်အရာဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင်အပိုင်းများကိုအညီအမျှခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့် သင်လိုအပ်သောရိက္ခာကို ယူ၍ အလွန်အကျွံစားခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်လိမ့်မည်.
သင်ဟာလုံးလုံးလျားလျားမယုံကြည်သေးရင် သင်၏အပတ်စဉ်မီနူးအတွက်စီစဉ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများစွာ၊ အစားအစာပြင်ဆင်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကိုသတိပြုပါ။
သင်ငွေစုပါတယ်မရ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကို ၀ ယ်ယူရန်တစ်ခုတည်းသော ၀ ယ်ယူမှုဖြစ်သည်။ အမြဲလိုလိုသေးသေးလေးတွေအများကြီး ၀ ယ်တာကပိုစျေးကြီးတယ်ဆိုတာသက်သေပြပြီးပါပြီ သူတို့သည်လိုအပ်သည်ထက်ပိုသောအရာများကိုယူကြသည်.
သင်လည်းအချိန်ကုန်သက်သာသည်မရ။ တစ်ရက်တည်းတွင်သင်သည်တစ်ပတ်လုံး၏အစားအစာတစ်ပိုင်းကိုပြင်ဆင်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အဆင်သင့်ထည့်ထားသောကွန်တိန်နာများသို့ခွဲလိမ့်မည်။
အချိန်တိုင်းမင်းဘာစားလဲမင်းသိတယ်မရ။ မင်းရဲ့အစားအစာတွေကိုရေခဲသေတ္တာထဲမှာအဆင်သင့်လုပ်ထားရင်မင်းဒီထက်အများကြီးပိုကုန်ကျလိမ့်မယ် အမြန်အစားအစာများမှာယူရန်သွေးဆောင်မှု.
ကျန်းမာအောင်စားပါမရ။ သင်၏အစားအစာကိုအဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြင့်ယခင်အချက်ကိုဖြည့်စွက်ပါ သဘာဝကထုတ်ကုန် မင်းပိုစားပြီးပိုကျန်းမာတယ်။
အစားအစာနည်းသွားသည်မရ။ အိမ်တစ်လုံးစီ၌ထိန်းချုပ်ရမည့်အရာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် အစားအစာစွန့်ပစ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိလူများစွာသည်အစာရေစာပြတ်လပ်နေသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမှာဤအချက်သည်စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ အရင်းအမြစ်များသည်အကန့်အသတ်ရှိသည် မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုအစာမဖြုန်းသင့်ပါ.
အပတ်စဉ်မီနူးတွင်အစားအစာများစီစဉ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်မြင်ပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်စာရွက်လှလှတစ်ရွက်၊ သင်အကြိုက်ဆုံးဘောပင်နှင့်အစီအစဉ်ဆွဲရန်လိုသည်။ စနစ်တကျစီစဉ်ထားသောအစားအစာများရရှိခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုသင်မကြာခင်တွေ့ရလိမ့်မည် အချိန်တိုင်းနှင့်ပင်လျှင်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်၎င်းကိုသတိပြုမိပြီးတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ » Meal Prep၊ အပတ်စဉ် menu စီစဉ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ